Horumarinta dadaallada: DielmoOpenLiDAR - Geofumadas
Janaayo, 2009 GvSIG, topografia
Ago maalmo yar ayaan ku hadlay ee dadaalka lagu fulinayo marka la eegayo xogta LIDAR, si aan maanta u gudbiyo war rasmi ah oo daabacday DIELMO 3D SL
DielmoOpenLiDAR: Nidaamka bilaashka ah ee loogu talagalay la socodka xogta LIDAR
In ka badan 5 sano ka hor DIELMO 3D SL ayaa ka shaqeeya horumarinta software for baaraandegidda xogta LiDAR, isticmaalkiisa gudaha soo saarka ee lagu daydo Digital Dhul (DTM) on mashaariic badan, helitaanka tayo sare leh oo sax in wax soo saarka final in ay bixiyaan software ganacsiga ee lagu iibiyo suuqa.
Ilaa dhawaan, qorsheheenu wuxuu ahaa in dib-u-booto iyo software for LiDAR data processing our tan iyo bilowgii inay ka sameeyaan a bixiyayaasha xogta u janjeedha software ganacsiga, si kastaba ha ahaatee, iyadoo la kaashanayo CIT ayaa go'aansaday in uu qaado tallaabo si ay u horumariyaan a software cusub oo lacag la'aan ah xogta ka baaraandegidda waxaan LiDAR dhamaadka janjeedha user, marka la barbar dhigo line more dhaqanka diiradda on software ganacsi.
Ugu dambayntii, iyada oo gacan ka heleysa Wasaaradda Kaabayaasha iyo Gaadiidka ee Generalitat Valenciana (CIT) waxaan go'aansannay inaan qaadno tallaabooyinka lagu abuurayo DielmoOpenLiDAR
DielmoOpenLiDAR waa software free ah GNU GPL shati ku salaysan gvSIG lagu maareeyo xogta LiDAR. Ilaa hadda waxaan samaynay Driver ah helitaanka xogta LiDAR in gvSIG. darawalka Tani waa aasaas u ah maaraynta xogta qaabab kala duwan caadiga ah, si ay u yarad gvSIG leh qalabka aasaasiga ah oo u oggolaan horumarinta xogta LIDAR shaqeeya ugu hufan oo fudud ee suurtogalka ah. Dhinaca kale, dadka isticmaala gvSIG in la furo xogta asalka ah LiDAR (LAS iyo QASHIN) sidoo kale waxaa loo ogolaan doonaa, bandhigay superimposed on kasta oo macluumaadka kale ee juqraafi, la tasho qiimaha asalka ah ee kasta oo ka mid ah dhibcood iyo tafatirka.
Marka saldhigyada horumarinta ee la xiriira xogta LiDAR ee gvSIG ayaa la sameeyay, marxaladda soo socota waxay ka koobnaan doontaa samaynta dhammaan qalabka lagama maarmaanka ah si ay u awoodaan inay qabtaan xogta xogta LiDAR ee buuxisay gvSIG. Dhinaca kale waxaan ku siin doonaa gvSIG iyada oo la adeegsanayo algorithms xisaabinta tooska ah iyo dhinaca kale waxaanu hirgelin doonaa qalab wax qabad oo hagaya oo u oggolaanaya tayada xakamaynta natiijooyinka. Laga soo bilaabo alaabooyinka aasaasiga ah ee aan ku guuleysan karno in aan soo saarno wajiga labaad ee mashruuca, wajiga saddexaad wuxuu ka kooban yahay horumarinta qalab caqli-gal ah oo loogu talagalay sameynta alaab cusub oo qiimaha lagu daray.
Iyadoo horumarinta software this free si loo maareeyo xogta LiDAR, DIELMO 3D ujeedadiisu tahay in la keeno isticmaalka technology LiDAR Heerka users GIS iyo bulshada sayniska, iyada oo ujeedadu of kordhin isticmaalkeeda. Intaa waxaa dheer, waxaa hadda sii kordheysa u muuqdaan in ay leeyihiin xog dheeraad ah laga heli karaa LiDAR daboolaya goobo badan oo dalka iyo dhawr sano macluumaadka oo dhan waxay noqon doontaa bilaash qof kasta si ay u helaan. Tusaale ahaan, marka xogta LiDAR waxaa laga heli karaa Country Basque ee lagu gaari karaa iyada oo loo marayo Council Gobolka ee Guipuzcoa iyo Uruurinta Service of the Department of Deegaanka iyo Qorsheynta Xukuumadda Basque ah.
Post Previous«Previous Sannad ka mid ah nidaaminta ayaa i sugaya
Post Next kml to dxf - Shan waa shan hab oo loo dhigo isbedelkaasNext »